Dhageyso: Mas,uuliyiin ka tirsan DFS iyo Maamulka Koonfur galbeed oo ku wajahan Magaalada Baraawe – Radio Muqdisho
Wararka ka imaanaya Magaalada Baraawe ee Gobolka Shabeelaha hoose ahna Caasimadda Maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo sheegaya in Maanta ay gaari doonaan Mas,uuliyiin kala duwan.
Wariye Maxamed Cali Cumar Jubba oo ka tiran Warbaahinta Qaranka kuna sugan Magaalada Baraawe ayaa soo sheegaya in lagu wado Saacadaha soo socda ay Baraawe gaaraan Mas,uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Koonfur galbeed.
Mas,uuliyiinta ka imaanaysa Maamulka Koonfur galbed Soomaaliya ayaa waxaa hugaaminaaya Madaxwenaha Maamulkaasi Shariif Xasan Shiikh Aadn iyo xubno ka tiran Labada Gole ee Maamulkiisa.
Waxaana Magaalada Baraawe ee Gobolka Shabeelaha Hoose ka soconaysa qaban qaabada soo dhaweynta Mas,uuliyiinta ku wajahan Madaalada iyadoo siweyn loo adkeeyay Amaanka Magaalada Baraawe maadaam ay tagayaan Xubno kala duwan.
Socdaalka Mas,uuliyiintaan ayaa lagu sheegay in ay ku saabsan tahay u kuurgalka xaalada Amaan ee Magaalada iyo dhiiro galinta Ciidamada Xoogga Dalka.
Halkaan hoose ka dhageyso Codka Wariye Jubba: